septembre 2016 – filazantsaramada
MIRAIKITRA AMIN’NY RAZANTSIKA NY FITIAVAN’ANDRIAMANITRA
« Kanefa ny razanao no niraiketan’ny fitiavan’i Jehovah, ka nifidy anareo zanany mandimby azy Izy mihoatra noho ny firenena rehetra, tahaka ny amin’izao anio izao. Koa forao ny fonareo, fa aza mafy hatoka intsony hianareo. » Deotornomia 10:15-16 Andriamanitra nanafaka ny olony izay nitaraina taminy andro aman-alina. Hita teo amin’ny fianan’ny olony ny fifaliana noho ny fanavotana […]
Publié parfilazantsaramada septembre 30, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MIRAIKITRA AMIN’NY RAZANTSIKA NY FITIAVAN’ANDRIAMANITRA
Fihaonan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaire” FF
Fampahafantarana ny Tale vaovaon’ny Feon’ny Filazantsara Ny 17 Septambra 2016 dia nihaona teto amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara Ampandrana ireo mpiara-miasa an-tsitrapo rehetra “volontaires” eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina. Fotoana izay nahampahafantarana azy ireo ny Talen’ny feon’ny Filazantsara vavao, Atoa Andriamanjaka Daniel. Fihaonana fanindroany ao anatin’ny taona izay natao indrindra koa hisaorana sy hankasitrahana […]
Publié parfilazantsaramada septembre 30, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fihaonan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaire” FF
Mitarika ny olona ho ao amin’ny Fiangonana Mikendry mandrakariva ny hitarika olona maro ho ao amin’ny Fiangonana ny Feon’ny Filazantsara (FF). Anisan’ny fitaovana mahomby hahatratrana izany ny fandefasana horonan-tsarimihetsika. Koa dia nohararaotina nandritra ny fanatanterahana ny fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” izay natao tany amin’ny FLM Ankazobe ny 15 Septambra 2016 hariva ny nanasa ny […]
Publié parfilazantsaramada septembre 29, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fandefasana horonan-tsarimihetsika
MAHARETA AMIN’NY FIVAVAHANA.
« Mahareta amin’ny fivavahana. » Rom 12:12b Epistily nosoratan’i Paoly ho an’ny Romana, epistily manambara ny toe-piainana tokony arahin’ny Kristiana. Raha ny vavaka dia resaka ataon’ny olona amin’Andriamanitra, mitaky finoana ny firesahana amin’Andriamanitra izay tsy hita maso. Noforonin’Andriamanitra tahaka ny endriny isika olombelona, ary ny firesahana Aminy no isan’izany endrika izany. Ny firaisana amin’i Jehovah Andriamanitra no […]
Publié parfilazantsaramada septembre 21, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MAHARETA AMIN’NY FIVAVAHANA.
Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara :
Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Tontosa soa aman-tsara ny 15, 16 Septambra 2016 teo ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” voalohany ho an’ny taom-piasana 2016/2017, teny amin’ny FLM Ankazobe Finoana, Fileovana Ambatovinaky, SPAnta. Mpiofana 17 avy amin’ny Fiangonana 6 (ao anatin’ny Fitandremana Ankazobe) no nandray anjara tamin’ny fampiofanana. Pastora, Andrianatoandro Léon Fidèle, Mpitondra […]
Publié parfilazantsaramada septembre 21, 2016 octobre 12, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara :
VATOLAMPY TSY MIOVA
« Izaho dia Izaho no Izy ka tsy misy andriamanitra eto amiko » Deotornomia 32:39 Ity teny ity dia ao anatin’ny hira nataon’i Mosesy, manambara ny maha vatolampy tsy miova an’i Jehovah Andriamanitra. Ny olony no miovaova fa Izy tsy miova. Andriamanitra manambara tena amin’ny asany, dia ny zavatra nohariany, izay hita fa tsy misy ny toa […]
Publié parfilazantsaramada septembre 16, 2016 septembre 14, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur VATOLAMPY TSY MIOVA
IRAY IHANY NO TOMPONTSIKA
« Tsy misy olona mahay manompo tompo roa; fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany; na ny anankiray hombany, ary ny anankiray ho hamavoiny. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy Mamona hianareo. » Matio 6:24 Jehovah Ray efa namorona ny olombelona tahaka ny endriny. Mampiseho ny fitiavany izany. Tsy izany ihany fa nataony ho mpanjaka […]
Publié parfilazantsaramada septembre 9, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur IRAY IHANY NO TOMPONTSIKA
Fihaonana amin’ireo raiamandreny ara-panahy Mitohy hatrany ny fampahafantaran’ny Feon’ny Filazantsara (FF) ireo sehatr’asa vokariny amin’ireo Fiangonana izay liana amin’izany. Fihaonana mivantana amin’ireo raiamandreny Pastora/Mpitandrina na amin’ny alalan’ny antso amin’ny finday moa no hanatanterahana izany. Tamin’ity herin’andro ity àry dia nihaona tamin’Atoa Razafindrakoto David Clement, Mpitandrina ao amin’ny METM Betlehema Fanantenana Ankazomanga ireo solon-tenan’ny mpiasa FF. […]
Publié parfilazantsaramada septembre 7, 2016 septembre 7, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fananganana fiaraha-miasa vaovao
MITADY NY TAVANY
« Fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay rehetra manetry tena no asandratra. » Lioka 18:14b Teny nataon’i Jesosy rehefa nanao ny fanoharana ny amin’ilay Fariseo sy ilay lehilahy mpamory hetra io teny io. Samy niakatra teo an-kianjan’ny tempoly nivavaka izy roa lahy. Saingy, samy nanana ny fomba nataony avy. Ilay Fariseo namelabelatra tamin’i Jehovah ny […]
Publié parfilazantsaramada septembre 2, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MITADY NY TAVANY